တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အား ချန်ပါဆပ် ပြည်နယ် စစ်ဌာနချုပ်မှူး Brigadier General Sukai Phimmasan က ဂုဏ်ပြု ညစာစားပွဲဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
အောကျတိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၈
လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lieutenant General Chansamone CHANYALATH ၏ဖိတ်ကြားချက်အရ လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ချန်ပါဆပ်ပြည်နယ်သို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသည့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက် ညပိုင်းတွင် Champasak Grand ဟိုတယ်၌ ချန်ပါဆပ်ပြည်နယ်စစ်ဌာနချုပ်မှူး Brigadier General Sukai Phimmasan က ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။
အဆိုပါ ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲအခမ်းအနားသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းထွန်းဦးနှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ၊ လာအိုနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကိုကိုနိုင်၊ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊ လေ) ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ကျော်မင်းတို့ တက်ရောက်ကြပြီး ချန်ပါဆပ်ပြည်နယ်စစ်ဌာနချုပ်မှူးနှင့်အတူ ချန်ပါဆပ်ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး H.E. Mr. Bun Thong Divisai နှင့် လာအိုတပ်မတော်မှ အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြသည်။
ဦးစွာတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီးတို့အား ချန်ပါဆပ်ပြည်နယ် စစ်ဌာနချုပ်မှူးနှင့် ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့က ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြပြီး ချန်ပါဆပ်ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ပြည်နယ် စစ်ဌာနချုပ်မှူးတို့က နယ်မြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေများနှင့် နယ်မြေဒေသအခြေအနေများ အား ရှင်းလင်းပြောကြားကြသည်။
ယင်းနောက် ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲအားကျင်းပပြုလုပ်ရာ ချန်ပါဆပ်ပြည်နယ် စစ်ဌာနချုပ်မှူးက ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားသည်။ ထို့နောက် ညစာအားအတူတကွ သုံးဆောင်ကြသည်။ ညစာမသုံးဆောင်မီနှင့်သုံးဆောင်နေစဉ် အတွင်း ချန်ပါဆပ်ပြည်နယ်စစ်ဌာနချုပ်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့မှ တေးသံသာများ၊ အက ပဒေသာများဖြင့် သီဆိုတီးမှုတ်ကပြဖျော်ဖြေကြသည်။
ညစာသုံးဆောင်အပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီး၊ ချန်ပါဆပ်ပြည်နယ် အုပ်ချုပ် ရေးမှူး၊ ပြည်နယ်စစ်ဌာနချုပ်မှူးနှင့်ဇနီးတို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ကြသည်။ ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီးတို့က ချန်ပါဆပ်ပြည်နယ် စစ်ဌာနချုပ် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့အား အမှတ်တရပန်းခြင်းနှင့်ချီးမြှင့်ငွေများပေးအပ်ပြီးစုပေါင်း ဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့ကြသည်။
လာအိုအမြိုးသားကာကှယျရေးဝနျကွီး Lieutenant General Chansamone CHANYALATH ၏ဖိတျကွားခကျြအရ လာအိုပွညျသူ့ဒီမိုကရကျတဈသမ်မတနိုငျငံ၊ ခနျြပါဆပျပွညျနယျသို့ ခဈြကွညျရေးခရီးရောကျရှိနသေညျ့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဦးဆောငျသော မွနျမာ့တပျမတျောခဈြကွညျရေးကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား အောကျတိုဘာ ၁၂ ရကျ ညပိုငျးတှငျ Champasak Grand ဟိုတယျ၌ ခနျြပါဆပျပွညျနယျစဈဌာနခြုပျမှူး Brigadier General Sukai Phimmasan က ဂုဏျပွုညစာဖွငျ့တညျခငျးဧညျ့ခံသညျ။
အဆိုပါ ဂုဏျပွုညစာစားပှဲအခမျးအနားသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ဇနီး ဒျေါကွူကွူလှ၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး သနျးထှနျးဦးနှငျ့ တပျမတျော အရာရှိကွီးမြား၊ လာအိုနိုငျငံဆိုငျရာမွနျမာသံအမတျကွီး ဦးကိုကိုနိုငျ၊ မွနျမာစဈသံ(ကွညျး၊ရေ၊ လေ) ဗိုလျမှူးကွီး ကြျောကြျောမငျးတို့ တကျရောကျကွပွီး ခနျြပါဆပျပွညျနယျစဈဌာနခြုပျမှူးနှငျ့အတူ ခနျြပါဆပျပွညျနယျ အုပျခြုပျရေးမှူး H.E. Mr. Bun Thong Divisai နှငျ့ လာအိုတပျမတျောမှ အရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွသညျ။
ဦးစှာတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ဇနီးတို့အား ခနျြပါဆပျပွညျနယျ စဈဌာနခြုပျမှူးနှငျ့ ပွညျနယျ အုပျခြုပျရေးမှူးတို့က ကွိုဆိုနှုတျဆကျကွပွီး ခနျြပါဆပျပွညျနယျ အုပျခြုပျရေးမှူးနှငျ့ ပွညျနယျ စဈဌာနခြုပျမှူးတို့က နယျမွဖှေံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု အခွအေနမြေားနှငျ့ နယျမွဒေသေအခွအေနမြေား အား ရှငျးလငျးပွောကွားကွသညျ။
ယငျးနောကျ ဂုဏျပွုညစာစားပှဲအားကငျြးပပွုလုပျရာ ခနျြပါဆပျပွညျနယျ စဈဌာနခြုပျမှူးက ကွိုဆိုနှုတျခှနျးဆကျစကားပွောကွားသညျ။ ထို့နောကျ ညစာအားအတူတကှ သုံးဆောငျကွသညျ။ ညစာမသုံးဆောငျမီနှငျ့သုံးဆောငျနစေဉျ အတှငျး ခနျြပါဆပျပွညျနယျစဈဌာနခြုပျယဉျကြေးမှုအဖှဲ့မှ တေးသံသာမြား၊ အက ပဒသောမြားဖွငျ့ သီဆိုတီးမှုတျကပွဖြျောဖွကွေသညျ။
ညစာသုံးဆောငျအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ဇနီး၊ ခနျြပါဆပျပွညျနယျ အုပျခြုပျ ရေးမှူး၊ ပွညျနယျစဈဌာနခြုပျမှူးနှငျ့ဇနီးတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျ ပေးအပျကွသညျ။ ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ဇနီးတို့က ခနျြပါဆပျပွညျနယျ စဈဌာနခြုပျ ယဉျကြေးမှုအဖှဲ့အား အမှတျတရပနျးခွငျးနှငျ့ခြီးမွှငျ့ငှမြေားပေးအပျပွီးစုပေါငျး ဓာတျပုံ ရိုကျခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာအိုနိုင်ငံ၊ ချန်ပါဆပ် ပြည်နယ်ရှိ ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် Wat Phu ဘုရားကျောင်းသို့သွားရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာ
နိုင်ငံတကာအားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုရရှိခဲ့ကြသည့် နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် တပ်မတော်သား အားကစား သမားများနှင့် နည်းပြများအား ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပ
မတျ ၁၉၊ ၂၀၁၉ Admin 0